ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ် အတွက် လိုင်စင် ရ အထိမ်းအမှတ် ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းအား သည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၂၁. ၂ x တိုးလာ သည် - Pandaily
ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ် အတွက် လိုင်စင် ရ အထိမ်းအမှတ် ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းအား သည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၂၁. ၂ x တိုးလာ သည်
Feb 10, 2022, 20:42ညနေ 2022/02/11 14:16:54 Pandaily
ကြာသပတေး နေ့က ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှ ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောရေးဆို ခွင့်ရှိ သူက လက်ရှိ စားသုံးမှု ကိန်းဂဏန်း များ ကိုမိတ်ဆက် ပေးခဲ့ပြီး မီးမောင်းထိုးပြ ခဲ့သည်အွန်လိုင်း နှစ်သစ်ကူး စျေးဝယ် ပွဲတော် 2022စုစုပေါင်း ၂၉ ရက် ကြာသည်။
ဟောပြော သူသည် မကြာသေးမီက စျေးဝယ် ပွဲတော် များအတွက် အထွေထွေ အကြောင်းအရာ များစွာကို ဖော်ပြခဲ့သည်။
ပထမ ဦး စွာ နွေ ဦး ရာသီ ပွဲတော် အတွင်း စျေးဝယ် သူများအတွက် အရည်အသွေး သည် အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်ပြီး ရိုးရာ ကုန် ပစ္စည်းများသည် လူကြိုက်များ ဆဲဖြစ်သည်။ ချေ ာက လက်၊ အခွံ မာ သီး၊ လက်ဖက် ၊ ဝိုင် နှင့်အခြား လက်ဆောင် သေတ္တာ များ ရောင်းအား သည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၆၆% ၊ ၄၁. ၄% ၊ ၂၃. ၂% နှင့် ၂၂. ၇% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ဒီနှစ် မှာတော့ အချိန်ကုန် ခံပြီး အမှတ်တံဆိပ် တွေဟာ အွန်လိုင်း မှာ ပိုပြီး ဆွဲဆောင် မှုရှိ လာပြီး အားလပ်ရက် အသုံးစရိတ် ကိုလှုံ့ဆော် ပေး ခဲ့တယ်။
ထို့အပြင် အဆင့်မြှင့်တင် မှုများ သည်ယခုနှစ် စျေးဝယ် ပွဲ တော်၊ ပရိုဂျက် တာ များ၊ အနှိပ် ခံ စက် များနှင့် ၆၅ လက်မ အထက် တီဗီ များကဲ့သို့သော စမတ် ထုတ်ကုန် များအတွက် nbsp ၏ နောက်ထပ် ကြီးမားသော အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရောင်းအား သည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၉၀. ၃% ၊ ၃၄. ၃% နှင့် ၂၀. ၇% တိုးတက်ခဲ့သည်။ တရုတ်-chic ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ၊ အမျိုးသား ဂီတ တူရိယာ များ နှင့်မ ပြောင်းလဲနိုင်သော ယဉ်ကျေးမှု အမွေအ နှစ်များ ရောင်းအား သည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၉၄. ၆% ၊ ၃၃. ၇% ၊ ၂၆. ၅% နှင့် ၁၆. ၅% တိုးတက်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် ပရိဘောဂ ရောင်းအား သည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၇. ၃% တိုးတက်ခဲ့ပြီး ပြည်တွင်း လက်မှု ပစ္စည်း ရောင်းအား သည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၂၆. ၇% တိုးတက်ခဲ့သည်။
ဒုတိယအချက်မှာ ဆောင်းရာသီ အားကစား နှင့် အပန်းဖြေ ပစ္စည်းများ ရောင်းအား မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ် ကုန် ပစ္စည်းများ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများ စသည် တို့သည် ကောင်းစွာ ရောင်းချ နေသည်။ ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ် လိုင်စင် ရ အထိမ်းအမှတ် ကုန် ပစ္စည်းများ၏ ရောင်းအား သည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၂၁. ၂ ဆ မြင့်တက် ခဲ့သော်လည်း နှင်း လျှော စီး ပစ္စည်းကိရိယာ များနှင့် နှင်း လျှော စီး အဝတ်အစား များ ရောင်းအား သည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၆၂. ၉% နှင့် ၆၁. ၂% အသီးသီး တိုးတက်ခဲ့သည်။ ဆောင်းရာသီ အားကစား ဦး တည်ရာ ခရီးစဉ် များသည် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် များ နှင့်အလွန် ရေပန်းစား သည်။ ဈေးဝယ် ပွဲတော် အတွင်း အွန်လိုင်း နှင်း လျှော စီး လက်မှတ် ရောင်းအား သည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၀၂. ၁% တိုးတက်ခဲ့သည်။ သက်ဆိုင်ရာ e-commerce ပလက်ဖောင်း များအတွက် အခြား ဆောင်းရာသီ အမှတ်တရ များအတွက် အမှာစာ များသည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၃၀% ကျော် တိုးတက်ခဲ့သည်။
တတိယ အချက်မှာ အစိမ်းရောင် စားသုံး မှုသည် စျေးဝယ် သူများအတွက် စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်သည်။ ဂေဟစနစ် သားမွေး များ၊ ပြန်လည်အသုံးပြု နိုင်သော အစားအစာ အသုံးအဆောင် များနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြု အိတ် များ ရောင်းအား သည်တစ် နှစ်နှင့် တစ်နှစ် ၂၆ ၅. ၉% ၊ ၂၀. ၂% နှင့် ၁၇. ၁% အသီးသီး တိုးတက်ခဲ့သည်။ အီလက်ထရောနစ် မီးသတ် သမား များ၏ ရောင်းအား သည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁. ၄ ဆ တိုးတက်ခဲ့သည်။ အော်ဂဲနစ် ဟင်းသီးဟင်းရွက် များ၊ အော်ဂဲနစ် နို့ နှင့် အော်ဂဲနစ် ဆန် များ ရောင်းအား သည် တစ်နှစ်လျှင် ၃ ၃၅. ၆% ၊ ၇၈. ၉% နှင့် ၂၄. ၂% အသီးသီး တိုးတက်ခဲ့သည်။
အွန်လိုင်း စားသောက်ကုန် ရောင်းအား သည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၂၈. ၅% တိုးတက်ခဲ့ပြီး ၄ င်းတို့ အနက် In-store နှင့် takeaway ရောင်းအား သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ကထက် ၄၈. ၃% နှင့် ၂၂. ၆% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ထုတ်ယူ သည့် အမှာစာ အချက်အလက်များအရ ယခုနှစ် နွေ ဦး ရာသီတွင် ကုန်သည် များ မှပေးသော တရုတ် နှစ်သစ်ကူး ညစာ အရေအတွက်သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ကထက် နှစ်ဆ မြင့်တက် လာခဲ့ပြီး တရုတ် နှစ်သစ်ကူး ညစာ ဟင်းလျာ များ ရောင်းအား သည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁. ၄ ဆ တိုးတက်ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:ပေကျင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ သည် ရေခဲ ဆိပ် များကိုပြန်လည် ရောင်းချ ခြင်းအတွက် အပြစ်ပေး သည်
စတုတ္ထ အချက်-SCO ၏အထူး ထုတ်ကုန် လက်မှတ် အလွန် ရေပန်းစား သည်။ ဤ စျေးဝယ် ပွဲတော်ကို SCO ၏ ထုတ်ကုန် အထူး e-commerce တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် ပွဲ နှင့် တစ်ပြိုင်တည်း ကျင်းပ သည်။ ထို ကာလအတွင်း တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် ပွဲ ၁၈၀၀ နီးပါးကို ကျင်းပခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း အမျိုးသား အထူး ထုတ်ကုန် အမျိုးအစား ၁၅၀၀ ကို ရောင်းချ ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ရောင်းအား ယွမ်သန်း ၁၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅. ၇၃ သန်း) ရှိသည်။ အဓိက e-commerce ပလက်ဖောင်း များတွင် SCO နိုင်ငံများ၏ ထုတ်ကုန်များ ရောင်းအား သည်တစ် လနှင့် တစ်လ သိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။
အိုလံပစ် လှုံ့ဆော်မှု အနီရောင် စာအုပ် ပေါ်တွင် ဆောင်းရာသီ အားကစား ပို့စ် များကို ရှာဖွ ေပါ
Lifestyle Sharing Platform Xiao Hongshu မှ မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အချက်အလက်များအရ ဇန်န ၀ ါရီလ ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ် စတင် ချိန် မှစ၍ "နှင်း လျှော စီး" သော့ချက်စာလုံး များပါ ၀ င်သည့် ပလက်ဖောင်း ပေါ်တွင် တင် ထားသော အရေအတွက်သည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၂ ၃၂% တိုးတက်ခဲ့သည်။